बलिवुडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर आमा बन्दै, गरिन यस्तो तस्विर सार्बजनिक ! हेर्नुहोस् (फोटो सहित) – SUDUR MEDIA
December 18, 2020 December 19, 2020 AdminLeaveaComment on बलिवुडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कर आमा बन्दै, गरिन यस्तो तस्विर सार्बजनिक ! हेर्नुहोस् (फोटो सहित)
बलिवुडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कड आमा बन्ने भएकी छन । उनले सामाजिक संजालमा एक तस्विर सार्बजनिक गर्दै आफु आमा बन्ने तयारीमा रहेको बताएकी हुन् । प्रेमी रोहण प्रितसंग गत अक्टुबर २४ तारिख विवाह गरेकी नेहा चाडै आमा बन्न लागेकी हुन् । रोहनसँग एक तस्वीर सार्वजनिक गर्दै नेहाले लेखेकी छिन्–‘अब मेरो ख्याल राख्ने गर ।’
रोहनले पनि नेहासँगको तस्वीर शेयर गर्दै अब झन् धेरै ख्याल राख्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, गायक टोनी कक्कडले पनि आफू मामा बन्न लागेको उल्लेख गरेका छन् । कक्कड़ले गर्भवती भएको तस्विर सेयर गरेसंगै बलिवुडका कलाकारबाट बधाईको ओइरो लागेको छ । तस्विर हेर्नुहोस:
यो पनि हेर्नुहोस्ः ‘बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स् २०२०’ को ग्राण्ड फिनालेमा यस्तो खाना पस्किए सन्तोषले, बने उपविजेता (भिडियो) ! बिहिबार बेलुका बीबीसी वानमा प्रसारित ‘बीबीसी मास्टर सेफ प्रोफेसनल्स् २०२०’ को प्रतिष्पर्धाको ग्राण्ड फिनाले भएको छ । धेरैलाई पछी पार्दै नेपाली युवा सन्तोष शाह लगायत ३ जना ग्राण्ड फिनाले अर्थात उत्कृष्ट ३ मा प्रवेश गरेका थिए ।
ग्रान्ड फिनालेमा सन्तोषको मास्टर सेफ च्याम्पियन बन्ने सपना अधुरै रह्यो । उपाधि बेलायती सेफ आलेक्स वेवले जिते । सिराहा कर्जन्हाका ३५ वर्षीय शाहले भने, ”ट्रफी हात लगाउनु मात्र जित होइन, मैले निर्णायकहरू तथा नेपालीको मन जितिसकेको छु।”
ग्राण्ड फिनालेमा पनि सन्तोषले नेपाली खाना नै पस्किएका थिए । उनले रागाको मासु, पराठा, चट्नी, चामलको जाड तयार पारेर टिपिकल नेपाली कासको थालमा पस्किएका थिए । विश्वसामु नेपाली खाना चिनाउन र लाखौं नेपालीको मन जित्न सफल भएकाले उपाधिभन्दा त्यो महत्वपूर्ण भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन । ग्राण्ड फिनालेको भिडियो हेर्नुहोसः
भोलिको रा’शिफल हे’र्नुहोस् : मिति २०७७ साल पौष ०४ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२० डिसेम्बर १९ तारिख